စီးပွားရေး | ပြည်ထောင်စုထဲက ''ပအိုဝ်း''
Last7days: 4,093
စီးပွားရေး	← Go to the Next Page
ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အမေး/အဖြေကဏ္ဍ (၂)Published January 24, 2013 | By Admin-Khun	မေး(၁) –> နိုင်ငြံခားသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်မယ် ဆိုရင် ဘာတွေကို ဘယ်က စတင် လုပ်ရ မှာလဲ?
ဖြေ(၁) –> ဘာလုပ်ငန်းမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြု လုပ်မှာလဲ၊ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်း လုပ်မှာလား၊ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း လုပ်မှာလား၊ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်း လုပ်မယ် ဆိုရင် အနည်း ဆုံး နိုင်ငြံခားမတည် ရင်းနှီးရမယ့် ပမာဏ က အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၅)သိန်း ဖြစ်ပါတယ်၊ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း လုပ်မယ် ဆိုရင် အနည်းဆုံး မတည် ရင်းနှီး ရမယ့် ပမာဏ က အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၃)သိန်း ဖြစ်ပါတယ်၊
မေး(၂) –> နိုင်ငြံခားမတည်ငွေရင်း ဆိုရာမှာ ငွေသားသီးသန့် CASH ဘဲလား? ပစ္စည်း တန်ဖိုးရောပါပါသလား? ဖြေ(၂) –> နိုင်ငြံခားမတည်ငွေရင်း ဆိုရာတွင် နိုင်ငြံခားသား တစ်ဦးဦးက ခွင်ြ့ပုမိန့် အရ စီးပွား ရေး လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်တာတွေကတော့- (က) နိုင်ငြံခားငွေ
(ခ) စက် ပစ္စည်း၊ စက်ကိရိယာ၊ စက်ကိရိယာအစိတ်အပိုင်း၊ စက်အရန် ပစ္စည်း၊ အသုံးအဆောင်တန်ဆာပလာများ အပါအဝင် လုပ်ငန်းတွင် အမှန်တကယ် သုံးစွဲရန် လိုအပ်၍ နိုင်ငံတော်အတွင်း၌ မရရှိသော ပစ္စည်း၊
(ဂ) လိုင်စင်၊ တီထွင်မှု ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ စက်မှုဒီဇိုင်း၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ မူပိုင်ခွင့် စသည့် အသိဥာဏ် ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများကို တန်ဖိုးဖြတ်နိုင်သော အခွင့်အရေး (ဃ) ကျွမ်းကျင်မှုနည်းပညာရပ်
(င) အထက်ပါ တို့မှ လုပ်ငန်းတွင်တိုးပွားရရြှိပီး၍ ဖြစ်စေ၊ ဝေစုအကျိုးအမြတ်ကို ဖြစ်စေ ပြန်လည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသောငွေများ ဖြစ်ပါတယ်၊
မေး(၃) –> နိုင်ငြံခား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ (FDI) အနေနဲ့ လုပ်ငန်းတည်ဖို့ ‌‌မြေကိုဘယ်လိုရရှိမှာပါ လဲ ?
ဖြေ(၃) –> ကော်မရှင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအား ကော်မရှင်က ခွင့်ပြုသော စီးပွားရေး လုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်ကို ဆောင်ရွက်ရန် အလို့ငှာ ‌‌‌မြေငှားရမ်းခွင့်ရှိသူ သို့မဟုတ် ‌‌မြေအသုံး ပြုခွင့်ရသူထံမှ အောက်ပါ‌‌မြေများကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရ၏ ကြိုတင်သဘော တူညီချက်ဖြင့် ငှားရမ်းရန် ခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်၊ (က) အစိုးရပိုင်‌မြေများ
(ခ) အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း ပိုင်‌မြေများ
(ဂ) နိုင်ငံသားပိုင် ပုဂ္ဂလိက မြေများ
၎င်းအပြင် ကော်မရှင်သည် မြေလွတ်မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများကို အသုံးပြု၍ စီးပွား ဖြစ် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် ယင်းနှင့်ဆက်နွယ်လျက်ရှိသော စီးပွားရေး ဖြွံ့ဖိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်လိုသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူက ငှားရမ်းလိုသည့် မြေကို မြေလွတ်မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံ ခန့်ခွဲရေး ဗဟိုကော်မတီ၏ ခွင်ြ့ပုချက်နှင့် အညီ ငှားရမ်းရန် ခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်။
Posted in စီးပွားရေး | Leaveacomment	ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အမေး/အဖြေကဏ္ဍ (၁)Published January 24, 2013 | By Admin-Khun	မေး(၁) –> စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေမှာ ပြောနေကြတဲ့ MIC ရုံးနှင့် DICA ရုံးတို.ရဲ.လုပ်ငန်းသဘော သဘာဝများကို သိလိုပါတယ်။
ဖြေ(၁) –> DICA ဆိုတာ Directorate and Company Administration ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနကို ဆိုလိုပါတယ်၊ အဲဒီ ဦးစီးဌာနဟာ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်မှု ၀န်ကြီးဌာန လက်အောက်မှာ ရှိပါတယ်၊ အဲဒီ ဦးစီးဌာနရဲ. အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်ကြီး(၂)ရပ်မှာ ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နနှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက် ရတဲ့ လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါတယ်၊ MIC ဆိုတာက Myanmar Investment Commission မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်ကို ဆိုလိုပါတယ်၊ MIC အဖွဲ.သည် စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ၊ ဥပဒေဆိုင်ရာ၊ ၀န်ကြီးအဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ.စည်းထားသော အဖွဲ.အစည်း ဖြစ်ပါတယ်၊ အဆိုပါ MIC ရဲ. ရုံးလုပ်ငန်းများကို DICA က ဆောင်ရွက်ရပါတယ်၊ DICA သည် အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်မှု ၀န်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားမှုဖြင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ ကုမ္ပဏီများဖွဲ.စည်းခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်း အတွက် မှတ်ပုံတင်ခြင်း ကိစ္စရပ်ကို ဆောင်ရွက်ရတဲ့ ဦးစီးဌာနဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် DICA ကို ကုမ္ပဏီများ မှတ်ပုံတင်ရုံးလို.ခေါ်ကြပါတယ်၊ DICA ရုံးဟာ နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ် (၃၂)မှာ ရုံးစိုက်ပြီးတော့ ရုံးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါတယ်၊ DICA ရဲ. ရုံးလုပ်ငန်းအချို.ကို ရန်ကုန်မှာ ရုံးခွဲဖွင့်ပြီး ဆောင်ရွက်ရန်စီစဉ်နေပါတယ်။
မေး(၂) –> ဒါဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ခွင့်ပြုမိန်.နှင့် ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်တို.ရဲ. သဘောသဘာဝများကိုလည်း ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ်။
ဖြေ(၂) –> မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ခွင့်ပြုမိန်.ဆိုတာ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေတို.နှင့်အညီ MIC မှ ထုတ်ပေးတဲ့ ခွင့်ပြုမိန်.ဖြစ်ပါတယ်၊ ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ဆိုတာ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေနှင့် အညီ DICA မှ ထုတ်ပေးတဲ့ လက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်၊ MIC ခွင့်ပြုမိန်. ရရှိထားတဲ့ ကုမ္ပဏီ(၁)ခုဟာ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ရရှိပြီးဖြစ်နေပါတယ်။ သို.သော် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီတိုင်းမှာ MIC ခွင့်ပြုမိန်. ရှိချင်မှ ရှိပါမယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဥပဒေနှင့်အညီ အခွန်အကောက် ကင်းလွတ်ခွင့်များ ကို ခံစားလိုတဲ့ ကုမ္ပဏီများကသာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေများ နှင့်အညီ MIC ခွင့်ပြုမိန်. လျှောက်ထားကြလို. ဖြစ်ပါတယ်၊ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ကတော့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအတွက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာမှာ တရားဝင် အဖွဲ.အစည်း(၁)ခုအနေဖြင့် ရပ်တည်ကြောင်း မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
Posted in စီးပွားရေး |2Comments	Public Company ဆိုတာ (၂)Published July 16, 2012 | By Admin-Khun	Public Company လောကမှာ တစ်ခုခေတ်စားတာက Takeover တွေဖြစ်ပါတယ်။ Takeovers ဆိုတာကို Acquisition လို့လည်း သုံးနှုန်းကြပါတယ်။ The takeover of one company by another ပေါ့။ Public Company ကြီးတစ်ခုက နောက် ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို အခေကြေးငွေ ပေးပြီးတော့ ၀ါးမြိုလိုက်တာပေါ့ တစ်နည်းအားဖြင့်။ ဥပမာအနေနဲ့ စာဖတ်သူတွေ အင်္ဂလိပ်ကားတွေ ကြည့်ဖူးကြမှာပါ။ ဗွီဒီယိုဇာတ်ကားတွေကို ထုတ်လုပ်တဲ့ Paramount Picture ကိုလည်း သတိထားမိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ Present by Paramount Picture ဆိုပြီးတော့ တောင်ကုန်းပုံလေးပေါ်မှာ ကြယ်ပွင့်ပေါင်းများစွာနဲ့ အမှတ်တံဆိတ်ပါ ကုမ္ပဏီပေါ့။ ပြောချင်တာက အဲဒီ Paramount Picture Public ကုမ္ပဏီကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၄-ခုနှစ်က အခြား Public Company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Viacom ဆိုတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးက ၀ါးမြိုခဲ့ပါတယ်။
စီးပွားရေးလောကမှာ Takeover အမြဲဖြစ်ပွားလေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်တဲ့ German ကုမ္ပဏီဆိုရင်လည်း ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအခြေစိုက် အခြားကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုကို ၀ါးမြိုခဲ့တာ မျက်စိရှေ့တပ်အပ်မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ Acquisition ပေါ့။ ပြီးတော့ Consolidation လို့ခေါ်တဲ့ ၀ယ်ယူဝါးမြိုပြီး ကုမ္ပဏီနှစ်ခုရဲ့ နစ်တွေကို ပေါင်းစည်းတဲ့ Project တွေမှာပါ ကျရာကဏ္ဍကနေ ပါဝင်လှုပ်ရှားဖူးပါတယ်။ အတွေ့အကြုံ ပြန်မျှဝေတာပါ။ ဒီလိုပဲ တစ်ကြိမ်ပြီးတစ်ကြိမ် ၀ါးမြိုနေကြတာပါပဲ။ အခြားကုမ္ပဏီတွေလည်း ထိုနည်း၎င်းပဲ သတင်းစာတွေမှာ ၀ါးမြိုကြတဲ့အကြောင်းတွေ ဖတ်မိကြမှာပါ။ အဲဒီအပေါ်က Paramount လိုပဲ Universal Studios ကတော့ လူတိုင်းနီးပါး သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ သူ့ကို Takeover လုပ်ခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကို Wiki ကနေ ရည်ညွှန်းရမယ်ဆိုရင် Independent (1912-1952), Decca Records (1952-1962), MCA (1962-1997), Panasonic (1990- 1995), Seagram’s (1995-2000), Vivendi (original, 2000-2011), NBC Universal / NBCUniversal (original, 2004-present), General Electric (original, 49%, 2004 -present), နောက်ဆုံး ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူ အနေနဲ့ Comcast (current owner, 51% NBCU majority holder, 2011-present) စသည်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စီးပွားရေး လောကမှာ Takeover ဘယ်လာက် များပြားတယ်ဆိုတာ သတိထားမိမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ တွေ့မြင်နိုင်တဲ့ McDonald’s တို့ Burger King တို့လို Hamburger ရောင်းတဲ့ Fast Food ဆိုင်တွေကလည်း Public ကုမ္ပဏီများ ဖြစ်ကြပြီး Shares များဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခု စားသုံးသူတွေ သတိမထားမိတာ တစ်ခုက Coke နဲ့ Pepsi ဟာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းဆိုတာပါပဲ။ ဆိုလိုတာက ရင်းနှီးမြုပ်နှံတဲ့ လူအုပ်စု တစ်စုက ပိုင်ဆိုင်မှု အများအပြား ချုပ်ကိုင်ထားတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ Shareholder လို့ခေါ်တဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံတဲ့သူတွေ ကွဲပြားရင် ကွဲပြားမှာပေါ့။ အများပြည်သူကိုတော့ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုလို့ ပြသထားပေမယ့် သူတို့ရဲ့ Other Products List တွေကို ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ Pepsi နဲ့ Coke ပါမြဲပါပဲ။ ပြီးတော့ စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယားနဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ Pizza Hut ဆိုတာ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ ရောက်နေကြတဲ့ စာဖတ်သူတိုင်း သိကြပါတယ်။ အဲဒီ Pizza Hut ကို Pepsi က ပိုင်တယ်ဆိုတာကော သတိထားမိကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Posted in International Business | Leaveacomment	Public Company ဆိုတာ (၁)Published July 15, 2012 | By Admin-Khun	Private Company အကြောင်းကိုတော့ အရင်ပို့စ်မှာ ရေးပြီးသွားပါပြီ။ အခုရေးမယ့်အကြောင်းကတော့ Public Company လို့ခေါ်တဲ့ အများပိုင် ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ Private Company တွေဟာ Public Company တွေထက် များပေမယ့် အရွယ်အစားအရဆိုရင် Public Company တွေက ကြီးမားပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် လူတွေဟာ Public Company တွေမှာ လုပ်ချင်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျဉ်းချုပ်အနေနဲ့ စာဖတ်သူတွေရဲ့ အဖေ၊ အမေ၊ အဒေါ်၊ ဦးလေး၊ ညီ၊ အစ်ကို၊ မောင်နှမ ပြီးတော့ အမျိုးတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေ အစရှိသည် ဖြင့်တို့က Shares ၀ယ်ယူပြီး ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဖြစ်ခွင့် ရှိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Public Company က Shares တွေကို စုဆောင်းပြီးတော့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ Shares ပိုင်ရှင်တွေဟာ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Shares အနဲအများပေါ် မူတည်ပြီးတော့ အကျိုးအမြတ် ခံစားခွင့်တွေ ကွာသွားမှာပေါ့ဗျာ။
Shares တန်ဖိုးအတွက် စာဖတ်သူက ပိုက်ဆံသွင်းလိုက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ Public Company ကနေပြီးတော့ Stock Certificate ဆိုပြီးတော့ Certificate လက်မှတ်တစ်ခု ထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ Certificate ကို ပိုင်ဆိုင်ခြင်းအားဖြင့် စာဖတ်သူက အဲဒီ Public Company ရဲ့ ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ဆိုတာ သက်သေပြလိုက်တာပါပဲ။ အဲဒီ Certificate က တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ စာဖတ်သူ ၀ယ်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီး စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း (သို့မဟုတ်) အချိန်မရွေး ပြန်ရောင်းလို့ရပါတယ်။ အဲဒီလို အရောင်းအ၀ယ်တွေ ဖြစ်လာကြတဲ့အတွက် Stock/Shares market ဈေးကွက်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ အခြေခံ သဘောတရားတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာတာပါပဲ။
Public Company တွေဟာ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောရရင် Democratic Institution ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ မည်သူမဆို ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ True Equal Opportunity လို့ခေါ်တဲ့ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိရေးပေါ့ .. အဲဒီပုံစံသွားပါတယ်။ သူက အသားရောင် မဲလို့၊ ညိုလို့၊ ဖြူလို့၊ ယောက်ျားမို့လို့ မိန်းခလေးမို့လို့၊ ဘာလူမျိုးမို့လို့ ညာလူမျိုးမို့လို့ အစရှိတဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံတာမျိုး မရှိပါဘူး။ (ဆက်ဖတ်ရန်)
Posted in International Business | 1 Comment	Private Company ဆိုတာPublished March 23, 2012 | By Admin-Khun	ဘယ်လိုမျိုးကို Private Company (ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီ)ပေါ့ မြန်မာလို တိုက်ရိုက်ပြန်လိုက်ရင် .. အဲဒါဘယ်လိုမျိုးကို ခေါ်တာလဲဆိုတော့ .. လူတစ်ဦး၊ တစ်ယောက်တည်းက ပိုင်ဆိုင်တယ် (သို့မဟုတ်) လူနည်းစုကပိုင်ဆိုင်တယ် ဥပမာ မိသားစုလုပ်ငန်းလိုမျိုးပေါ့ အဲဒါကို Private Company တွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာပဲပြောပြော မြန်မာပြည်မှာပဲ ပြောပြောလုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေကြတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ တော်တော်များများဟာ Private Company တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ Private Company လို့ခေါ်သလဲဆိုရင် သူ့တို့ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုဟာ လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက် သို့မဟုတ် အုပ်စုငယ်တစ်ခု၊ တစ်မိသားစုကသာ ချုပ်ကိုင်ထားတာကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။
Private ကုမ္ပဏီတွေကို မိတ်ဆွေရဲ့ အိမ်အနီးအနား ပတ်ဝန်းကျင်တွေများ အမြောက်အများ တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ အချို့ကို ပြရရင်တော့ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်၊ ဖိနပ်ပြင်ဆိုင်၊ စက်ဘီးဆိုင်ကယ် ရောင်းတဲ့ဆိုင်၊ အဟောင်းဆိုင်များ၊ နာရီဆိုင်များ၊ အသီးအရွက်ရောင်းတဲ့ Vegetable Stands တွေ၊ နောက် Bars တွေရှိရင်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကျောက်မျက်ရတနာ ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီလည်း ရှိကောင်းရှိပါမယ်။ ပြီးတော့ တက္ကသိုလ်တွေ၊ ဆေးရုံတွေ တော်တော်များများဟာလည်း Private Company တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ မရေမတွက်နိုင်အောင် များပြားလှပါတယ်။
ကျွန်တော်အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ သူတို့ကို ဘာကြောင့် Private Company လို့ပြောရသလဲဆိုရင် General Public လို့ခေါ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ အများပြည်သူတွေဟာ သူတို့လုပ်ငန်းတွေမှာ ၀င်ရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလို့ မရလို့ပါ။
Posted in International Business | Leaveacomment	ကုမ္ပဏီဆိုတာဘာလဲ?Published March 22, 2012 | By Admin-Khun	လူအုပ်စုတွေ၊ လူအုပ်စုတွေ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု အတူလက်တွဲ လုပ်ကိုင်ကြတဲ့အခါ ကုမ္ပဏီတွေ ထောင်တတ်ကြတယ်ဆိုတာ အားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်တော်များများ တွေမှာလည်းပဲ ကုမ္ပဏီဆိုတဲ့ နည်းစနစ်နဲ့ သွားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ကုမ္ပဏီဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကဘာလဲ အမျိုးအစားတွေ ဘယ်လိုကွဲပြားသလဲဆိုတာကို ဗဟုတုတအနေနဲ့ ခွန်ပအိုဝ်းကို အလည်လာရောက်သူ မိတ်ဆွေသင်္ဂဟများသို့ မျှဝေချင်ပါတယ်။
Company ကုမ္ပဏီဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို Formal ကျကျခေါ်ရင် “Corporation” လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့။ “Corporation” ဘယ်ကလာသဲမေးရင် “Corpus” လို့ခေါ်တဲ့ Latin ဘာသာက လာတာပါတဲ့ဗျာ။ အဓိပ္ပါယ်က ဘာလဲဆိုရင် အင်္ဂလိပ်လို “Body”တစ်ခု တစ်နည်းအားဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အရာတစ်ခု၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခု၊ (သို့မဟုတ်) လူတစ်စုလို့ ခေါ်ပါတယ်တဲ့။ အဲဒါကြောင့် တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော်တို့ သတင်းစာတွေမှာ ဖတ်တတ်ရပါတယ် Government Body ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေဟာ အစိုးရတစ်ရပ်ကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ဖွဲ့စည်းထားသလိုမျိုးလို့ ဥပမာ ပြချင်တာ တူပါရဲ့ဗျာ။ ဆိုတော့ အဓိပ္ပါယ် အပြည့်အစုံကို ပြောရရင်တော့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ စုစည်းကြပြီးတော့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုကို အတူလက်တွဲပြီး လုပ်ကြတယ်လို့ ဆိုရမယ်ပေါ့ဗျာ။
“Corporation” တစ်ခုကို တည်ထောင်ချင်တဲ့အခါမှာ ခက်သလားလို့ မေးရင် ပညာရှင်တွေက မခက်ပါဘူးတဲ့ဗျာ။ ဘာလုပ်ဖို့ပဲလိုသလဲဆိုရင် “Corporation” တစ်ခု တည်ထောင်ဖို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနတွေမှာ Registration fee အနည်းငယ်ပေးသွင်းပြီး ဖောင်ဖြည့်လိုက်ရုံပါပဲတဲ့ဗျာ။ မှတ်ပုံတင်လိုက်တဲ့ ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ မိတ်ဆွေဟာ “inc” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကုမ္ပဏီနာမည်တွေရဲ့ နောက်မှာ တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုရင် (e.g. Khun Inc.) အဲဒီကုမ္ပဏီဟာ Corporation အနေနဲ့ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ကုမ္ပဏီဆိုတာ သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ နေပါအုံး “inc” ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ကရော ဘာကြီးလည်းလို့မေးရင် … “inc” ဆိုတာ “incorporated” တဲ့ဗျာ။ အဓိပ္ပါယ်က Corporation တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက် မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုလို့ အဓိပ္ပါယ်အပြည့်အစုံ ထွက်ပါတယ်။
ဒီတော့ဗျာ Corporation ဆိုတာ Company ကိုပြောတာ။ Incorporation ဆိုတာက Corporation ဖြစ်ဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်ချက်လို့ အကျဉ်းချုပ် မှတ်သားထားနိုင်ပါတယ်။ The formal name foracompany is “Corporation” တဲ့။ “Corporation” isabody formed for the purpose of carrying outabusiness တဲ့။ ပြီးတော့ Incorporation is the legal process of setting upacorporation ပေါ့ဗျာ။ အဓိပ္ပါယ်တွေ မှားတတ်လွန်းလို့ အကြိမ်ကြိမ် ပြန်ရေးပြရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအသုံးအနှုန်းတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး စတင်ပြောင်းလဲနေတဲ့ အချိန်ကာလတွေမှာ သိထားသင့်တယ် ထင်လို့ မျှဝေလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းတွေမှာ အချိန်ရရင် ရသလို ဒီ့ထက်ပိုပြီး အသေးစိပ် မျှဝေပါမယ်။ နောက် Private Company နဲ့ Public Company တွေရဲ့ ကွာခြားချက်တွေကိုလည်း တင်ပြဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ Private Company ဆိုတာ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း Public Company တွေဆိုတာ Shares တွေနဲ့ ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ရပ်တည်ထားပြီးတော့ လူတိုင်း Business Owner လို့ခေါ်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် ဖြစ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ် အစရှိတဲ့ Shares နဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေ တစ်နည်းအားဖြင့် Stock Market အကြောင်းတွေပေါ့ အတတ်နိုင်ဆုံး ရေးသားမျှဝေသွားဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ စောင့်မျှော် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ .. Posted in International Business | Leaveacomment	စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတာဝန်မှ Leading/DirectingPublished November 17, 2011 | By Admin-Khun	Managing လို့ခေါ်တဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ Leading လို့ခေါ်တဲ့ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားမှု စကားလုံးနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ တူမလိုလိုနဲ့ မတူပါဘူး။ Managing မှာ Manager တွေရှိတယ်။ အဲဒီမန်နေဂျာတွေ ဘာလုပ်သလဲဆိုရင် မန်နေဂျာတွေဟာ Employee လို့ခေါ်တဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ (သို့မဟုတ်) အလုပ်သမားတွေကို စီမံကွပ်ကဲရတယ်၊ တာဝန်တွေ ခွဲဝေသတ်မှတ်ပေးရတယ်။ သူ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ အလုပ်သမားတွေဟာ ပေးအပ်ခွဲဝေထားတဲ့ တာဝန်တွေကို ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်ကြရဲ့လား၊ နောက်ပြီး ကုမ္ပဏီပေါ်လစီ နည်းဥပဒေအတိုင်း လုပ်ဆောင်ရဲ့လား ဆိုတဲ့အချက်တွေကို လိုက်ကြည့်ရပါတယ်။ အဓိကကတော့ ကုမ္ပဏီရဲ့ (Goal or Object) ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေကို ကောင်းကောင်းနဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန် ဖော်ဆောင်နိုင်ရဲ့လားပေါ့။
၀န်ထမ်းတွေဟာ မန်နေဂျာခိုင်းတဲ့အတိုင်း၊ ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်း လိုက်လုပ်ကြရတယ်။ ပေးအပ်ထားတဲ့ တာဝန်ကို ကျေပွန်အောင် လုပ်ကြပြီး နောက်ဆုံး မန်နေဂျာကို လုပ်ငန်း ပြီးဆုံးမှု ရှိမရှိကို Report တင်ရပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင် မန်နေဂျာဟာ အဲဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့ Supervisor ဖြစ်ပြီး အဲဒီဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ပက်သက်သမျှ လုပ်ငန်းအားလုံးကို အဲဒီမန်နေဂျာက တာဝန်ယူထားရလို့ပါ။ အဲဒါ ခင်ဗျားကြီး ပြောမှလားဗျာလို့ ပြောစရာရှိပါတယ်။ အခြေခံကို နားလည်အောင် ရေးတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် … ရှိစေတော့ ..
Leading မှာ Leader လို့ခေါ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေရှိပါတယ်။ Employee လို့ခေါ်တဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ၊ အလုပ်သမားတွေက Leader တွေကို ဘယ်လိုမြင်သလဲဆိုရင် သူတို့ကို သူတို့ရဲ့ ပေးအပ်ထားတဲ့ တာဝန်တွေ မှန်မှန်ကန်ကန် ပြီးမြောက်အောင် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားပေးတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီး တစ်ယောက်လို့ မြင်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် သူတို့တွေကို Motivate လုပ်ပေးတဲ့ လူကြီးပေါ့။ Motivate ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်ရှိအောင် ဆွဲဆောင်၊ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားပေးတာကို ဆိုလိုတာပါ။ (ဥပမာ- I’m not motivated to do this job ဆိုတာ ကျွန်တော်ဟာ ဒီအလုပ်ကို လုပ်ချင်စိတ်မရှိဘူး ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။ စိတ်မပါဘူးပေါ့ဗျာ)။
Posted in Management-Basic | 1 Comment	← Go to the Next Page